Wasaaradda Gaadiidka Haydarpaşa iyo Sirkeci Station | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulOgeysiiska Haydarpaşa iyo Sirkeci Railway Station
22 / 10 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
wasaaradda gaadiidka ee Haydarpasa iyo tareenka saldhigga Sirkeci
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan, Agaasimaha Guud ee TCDD ee Haydarpaşa Gar aaga iyo nawaaxiga Sirkeci Gar ee kireynta qeybo ka mid ah gobolka shaqo la’aanta ah, Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu'nun ayaa bayaan ka soo saaray hadalada.
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M.Cahit Turhan ayaa yidhi;
"Maalmihii la soo dhaafay, waxaan aad uga xumahay in aan raaco hadallada ka soo yeeray Mr. Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Istanbul ee Magaalo Weyn 'ee warbaahinta bulshada. Mudane Madaxweyne wuxuu qaaday talaabooyin sharci ah oo ku saabsan qandaraaska TCDD. Dabcan, waxaan uga jawaabi doonnaa qaab sharciga ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahaa in aan wax ka idhaahdo umada saafiga ah ee Turkiga iyo dadka reer Istanbul, anigoo tixgelinaya xaquuqda qof walba uu leeyahay inuu ka warqabo xaqiiqada. Iyada oo hogaamineysa Madaxweynaheena Recep Tayyip Erdoğan, waxaan ugu adeegi lahayn dalkeena iyo qarankeena go'aan qaadasho iyo go’aamo sanadihii ugu dambeeyay ee 17.
Sida la ogsoon yahay, aagagga ku yaal guryaha la soo xusay ee dhabta ah waxay ku yaalliin Haydarpaşa iyo Sirkeci waxay ku dhexjiraan baaxadda goobta waxaana jira xaddidid ku saabsan soo-deynta. Meelahan ayaa loogama baahna sababtuna waa hoos u dhac ku yimid socodka rakaabkii kadib marki la eryay Marmaray.
Si loo siiyo daqliga TCDD iyadoo lagu tabarucayo waxqabadka dhaqanka iyo farshaxanka ee dadka reer Istanbul, hindise ayaa loo qabtay meelahan. Qandaraaska waxaa loo fuliyay si waafaqsan qaanuunka kiraynta ee TCDD.
Dhanka kale, Duqa Magaalada, kahor qandaraaslada, wuxuu yiri: "Waxaan ku qaadanayaa qandaraaskan kharashkastoo ay tahay" tartankana waa la joojiyay. Taasi waa; halkee hindise-bixiyuhu ka heli doonaa rukhsadaha, rukhsadaha iyo dukumiintiyada la xiriira howlaha halkan lagu qaban doono? Aaway dukumentiyada sida biyaha, gaaska dabiiciga ah, iyo tas-hiilaadka fayadhowrka? Dabcan, laga soo bilaabo Dawladda Hoose iyo hay'adaha ku xidhan… Marka la eego, ka qaybgalka Dawladda Hoose ee nidaamka hawshu waxay ka nuuxnuuxsatay mabda'a tartanka ilaa bilowgii.
Hadda waxaan ku weydiinayaa sida ay anshax ahaan ugu ahayd shirkadaha shirkadaha xiriirka la leh IMM inay ka qaybqaataan qandaraaska?
Aynu u nimaadno sheegashada Duqa Magaalada ee warbaahinta bulshada… Marka hore, waxaan jeclahay inaan muujiyo in sababta shirkadaha degmada loo baabi'iyey gundhigga aysan la xiriirin arrimaha ku xusan fiidiyowga lagu faafiyey warbaahinta bulshada.
Shuruudaha hindisada mar horeba waa loo sii diyaariyay si furan horeyba. Qandaraaska ka hor, shuruudaha in la buuxiyo haddii shirkaduhu ay galaan shaqsiyan ama shirkad wada jir ayaa si guud loogu dhawaaqaa.
Shirkadahaasi ayaa sheegay in Dawladaha Hoose aysan awoodin inay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay shaqsi ahaan ama shirkad ahaan.
Intaa waxaa sii dheer, in kasta oo ereyada açık si wada jir ah iyo dhowr ah "loogu caddeeyay si gaar ahaaneed, bayaankan kuma jiraan waxna lagama baddalayo qeybta istiraatiijiyada qandaraaska.
Imtixaankii ka dhashay, Guddiga Qandaraasluhu wuxuu go'aamiyay arrimahan oo dhan wuxuuna meesha ka saaray iskaashigii ay wadajir u sameeyeen shirkaddaha Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul.
Intaa waxaa sii dheer, wada shaqeynta dowladda hoose ayaa soo dalbatay wax ka yar.
Hadda waxaan weydiinayaa qof walba oo halkan jooga; Ma saxbaa in soo iibsadaha hoose uusan buuxin karin shuruudaha qandaraaska, ama in tartamayaasha sare ay ku guuleystaan ​​shuruudaha qandaraaska?
Halkan, waxaan si furan u weydiinayaa Mr. İmamoğlu, oo aan ognahay in maaddada hindisada ay dano gaar ah leedahay…
Ugu horreyn, miyay caadi u tahay Maamulka IMM, oo aan awood u lahayn diyaarinta xitaa dukumiintiyada loo baahan yahay ee cayiminta, isku dayo inuu helo hindisada? Miyuu weligiis raaci jiray qaabkan xiriirkiisa ganacsi ilaa iyo hadda?
Maxaa dabiici ah oo ku jira hindisada uu iskudayayo inuu galo, oo ka badan soo-bandhigaha bilyaneerka 3 ee qandaraaska shirkad wadaagga ah ee Dawladda hoose? Miyaanay dhib ku ahayn dadweynaha inay helaan macaash aad u sarreeya?
Olmadan la'aanteed, waxaan galay qandaraaska, oo aan ka yaraa; waa inaad i siisaa jilicsanaanta ”miyaanay ahayn cabsi-gelinta?
TCDD, 350 kun TL halkii ay ka ahayd shirkaddii soo bandhigtay inay kireyso, 100 kun oo kun oo TL ah ayaa ku dalbanaya shirkad wadaagga ah, hindisadaan, sharci iyo sharci? Haddii TCDD ay si kale u dhaqmi lahayd, miyaanay ahayn khasaare dadweyne? Tani ma nooc ka mid ah shuruudaha sharci darrada ah ee laga helo dadweynaha ee ay qaataan oo caado ka dhigtaan?
Waa maxay carada, faraha ayaa ku wareegaya hey'adda wax soo iibsaneysa, haddii cayiminta iyo tirooyinka la soo jeediyay ay dhexda ku jiraan wax walbana waa ay muuqdaan, haddii aysan jahwareerin hindisada?
In kasta oo IMM ay kumanaan jeer le'egtahay aagaggaas, muxuu ugu dhibi karaa Mr. İmamoğlu in dhaqan casri iyo farshaxan casri ah loo abuuri doono faa iidada bulshada ee ku aaddan mawduuca hindisada
TCDD; ayaa qabtay waxa, sidee, sababta iyo intee ay tahay in ay sameyso iyada oo la raacayo qawaaniinta.
Waa maxay ujeeddada Duqa Magaalada ee isku dayaya inuu ku carqaladeeyo sumcadda TCDD, oo ah mid ka mid ah hay’adaha sumcadda leh ee dalkeenna?
sidoo kale, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Caabudwaaq ayaa raba in la kansalo qandaraaska oo loo qoondeeyay Dawlada Hoose ee Magaalada. Codsi la mid ah ayaa ka yimid maamulkii hore ee Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul. Maamulayaasha Metropolitan-ka waqtigaas waxay codsadeen qoondeynta aagag aan adeegsan oo ay leeyihiin xarumaha Haydarpaşa iyo Sirkeci xarumaha Dowlada Hoose, TCDD-na ma aysan aqbalin codsigan.
Hadaan eegno dalkeena maanta, maanta waa maalinta midnimada iyo wada jirka. Maalmahaas macnaha leh, macquul uma ahan Duqa Magaalada inuu isku dayo inuu marin habaabiyo guud ahaan iyo dadka reer Istanbul isagoo marin habaabinaya xaqiiqda isla markaana la qaadaya qareenno dhowr ah.
Waa maxay ujeeddada Mudane Madaxweyne ee ah inuu isku dayo inuu bulshada sii xumeeyo isagoo marin habaabinaya xaqiiqda…
Miyuu qeyb ka yahay istiraatiijiyaddiisa isku soo dhaweynta ah ee uu isku dayo inuu ku kicinayo dadka reer Istanbul?
Intaa waxaa sii dheer, waxaan rabaa in aan sameeyo hal xasuusin oo u dambeysa oo aan u arko waxtar.
The Republic of Turkey waa gobol ka mid ah sharciga. Hay'adaheena waxaa loo maareeyay iyada oo loo raacayo mabaadi'da sharciga, maahan gar-qaadid. Tan waxaa ku jira degmooyinkeena. Ahaanshaha duqa magaalada qofna ma siinayo xorriyadda inuu sharciga jebiyo. Degmooyinka ama badhasaabyada sharciga kama sarreeyaan. Si kastaba ha noqotee, Mr. İmamoğlu, isaga oo booqanaya badhasaabyadii shaqada laga joojiyay, wuxuu muujiyey sida uu u kala horeeyo sharciga iyo sharciga.
Maayarku inuu ka gudbo tallaabooyinka sharciga, waxay sidoo kale ka dhigan tahay khayaanada muwaadiniinta uu u doortay. Qofna xaq uma leh inuu taas sameeyo.
Ugu dambayntiina, dadka Saint Istanbul!
Duqa Magaalada, dhanka kale, wuxuu dhanka kale wadaa dadaalo ah inuu iska ilaawo balanqaadyadii uu u balanqaaday Istanbul iyo dadka reer Istanbul isagoo qal qal galiyay ajandaha. Aaway ereyadaas?
Xaaladda guud, marka laga tago bilaabista mashruucyo cusub, waxay ila tahay adiga, dadka qaaliga ah ee Istanbul, in aad xaq u leedihiin inaad heysaan macluumaad ku saabsan joojinta howlihii la qabtay maamulkii hore ee degmada.
Maalmahan, markaan u baahanahay midnimo qaran iyo midnimo, ujeedka iyo ujeedka qofka u dhaqmayo aragtida iyo niyadda karti la’aanta gudashada waajibaadkiisa ayaa ah inaan la wadaagno fiidiyowyada ay ku jiraan muuqaallada beenta ah ee warbaahinta bulshada iyo inay dadkeena ku ridaan rabshadaha. Waxaan kaaga tagayaa sharaftaada iyo fekerkaaga.
Sharraxaadda Gawaarida ee Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta
Sharraxaadda metro Izmir ee Wasaaradda Gaadiidka
Mashruuca YHT Ankara-Istanbul ee Wasaaradda Gaadiidka
Qeexida tareenka xawaaraha sare ee Bolu-Eskisehir ee Wasaaradda Gaadiidka
Warqadda 'Winter tire' ee Wasaaradda Gaadiidka: waajib kuma aha
Sharraxaadda madaarka Konya oo ka yimid Wasaaradda Gaadiidka
Sharaxaada Express Express ee Wasaaradda Gaadiidka
Qoraalka Maddaarka Saddexaad ee Wasaaradda Gaadiidka
FSM iyo 15 Warsaxaafadeedka Jariidada Jariidada ee Wasaaradda Gaadiidka
Qandaraaska Haydarpaşa iyo Sirkeci Station
İzmir wuxuu heli doonaa Tababar Degdeg ah 2023